Waa kuma Danjiraha Cusub ee loo magacaabay Soomaaliya? – AwKutub News
Waa kuma Danjiraha Cusub ee loo magacaabay Soomaaliya?
Leave a Comment on Waa kuma Danjiraha Cusub ee loo magacaabay Soomaaliya?
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guturres ayaa Nicholas Haysom u magacaabay inuu noqdo danjirihiisa gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya.
Mr Haysom ayaa baddalay danjirihii horre Michael Keating oo muddo xilleedkiisa Soomaaliya uu dhammaaday.
Keating oo xafiiska UNSOM la wareegay bishii Janaayo ee sannadkii 2016-kii.
Danjire Nicholas Haysom waa 66 sano jir waa caddaan Koonfur Afrikan ah, waxa uu horrey u soo noqday wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsanaa waddamada Suudaan iyo Koofurta Suudaan, sidoo kale diblomaasigan ayaa horrey u soo noqday wakiilka Qaramada Midoobay ee waddanka Afghanistan.
Waxaa la sheegaa inuu ku taqasusay arrimaha dimoqraadiyadda, dowlad wanaagga, dib-u-heshiisiinta, nabadeynta iyo arrimo kale.
Si kastaba, dadka yaqaanna diblomaasigan u dhashay waddanka Koonfur Afrika waxa ay lee yihiin waxa uu ku fashilmay xasillinta colaadda ka jira dalka Suudaanta Koonfureed oo weli dagaallo sokeeye ay ka socdaan.
Mr Haysom, ayaa dhashay sannadkii 1952, waa aabbe leh shan carruur ah.
Magacaabistiisa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maamul gobolleedyada iyo dowlada dhexe ee Soomaaliya uu khilaaf u dhexyaalo.
Tags: Qaramada Midoobay Soomaaliya Wararka
Previous Entry Dib u dhac ku yimid soo laabashada Xubinnimo ee dalka Ereteriya
Next Entry Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan oo Wadankiisa lagu aasayo